ခရာကီကို အနိုင်ယူပြီး မစ်ဒယ်ဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
မိုဟာမက်ခရာကီ Mohammad Karaki ကို ပထမအချီမှာပဲ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန် Aung La N Sangြ
26 Oct 2018 . 10:58 PM
မန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ကစားသမား အောင်လအန်ဆန် Aung La N Sang ကတော့ သူ့ကို စိန်ခေါ်တဲ့ မိုဟာမက်ခရာကီ Mohammad Karaki ကို အလဲထိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက ဒီပွဲကို ခပ်မြန်မြန် အဆုံးသတ်မယ်လို့ ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း အောင်လအန်ဆန်ဟာ ပထမအချီ (၂)မိနစ် (၃၉)စက္ကန့်မှာပဲ ခရာကီကို အလဲထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခရာကီဟာ အောင်လအန်ဆန်ကို သူအားသန်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို ချုပ်ဆွဲလဲပြီး အလဲထိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အောင်လအန်ဆန်က ပါးပါးနပ်နပ် ရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ လက်သီးထိုးချက်တွေက ခရာကီကို ထိထိမိမိ ရှိခဲ့တာကြောင့် ပထမအချီစလို့ စက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ခရာကီဟာ ခံစစ်သက်သက်သာဖြစ်ခဲ့ရပြီး နှာခေါင်းရိုးကျိုးသွားခဲ့တဲ့အပြင် ပြတ်ပြတ်သားသားကို အရေးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
ခရာကီဟာ ဒီပွဲမတိုင်ခင် (၉)ပွဲမှာ ပွဲတိုင်းအနိုင်ရခဲ့ပြီး (၈)ပွဲက ပထမအချီမှာတင် အပြတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့ ပုံစံအတိုင်းပဲ အောင်လအန်ဆန်က အနိုင်ယူခဲ့တာလို့လည်း ပြောရမှာပါ။
Photo:MMA Fighting,Conan Daily,ONE Championship
မိုဟာမကျခရာကီ Mohammad Karaki ကို ပထမအခြီမှာပဲ အနိုငျယူခဲ့တဲ့ အောငျလအနျဆနျ Aung La N Sangွ
မနျမာပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော ကစားသမား အောငျလအနျဆနျ Aung La N Sang ကတော့ သူ့ကို စိနျချေါတဲ့ မိုဟာမကျခရာကီ Mohammad Karaki ကို အလဲထိုးနဲ့ အနိုငျယူခဲ့ပွီး မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲမတိုငျခငျကတညျးက ဒီပှဲကို ခပျမွနျမွနျ အဆုံးသတျမယျလို့ ကတိပေးထားတဲ့အတိုငျး အောငျလအနျဆနျဟာ ပထမအခြီ (၂)မိနဈ (၃၉)စက်ကနျ့မှာပဲ ခရာကီကို အလဲထိုးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ခရာကီဟာ အောငျလအနျဆနျကို သူအားသနျတဲ့ ပွိုငျဘကျကို ခြုပျဆှဲလဲပွီး အလဲထိုးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ အောငျလအနျဆနျက ပါးပါးနပျနပျ ရှောငျထှကျနိုငျခဲ့တယျ။ အောငျလအနျဆနျရဲ့ လကျသီးထိုးခကျြတှကေ ခရာကီကို ထိထိမိမိ ရှိခဲ့တာကွောငျ့ ပထမအခြီစလို့ စက်ကနျ့ပိုငျးအကွာမှာပဲ ခရာကီဟာ ခံစဈသကျသကျသာဖွဈခဲ့ရပွီး နှာခေါငျးရိုးကြိုးသှားခဲ့တဲ့အပွငျ ပွတျပွတျသားသားကို အရေးနိမျ့ခဲ့တာပါ။
ခရာကီဟာ ဒီပှဲမတိုငျခငျ (၉)ပှဲမှာ ပှဲတိုငျးအနိုငျရခဲ့ပွီး (၈)ပှဲက ပထမအခြီမှာတငျ အပွတျဖွတျနိုငျခဲ့လို့ ဒီတဈခါတော့ သူ့ ပုံစံအတိုငျးပဲ အောငျလအနျဆနျက အနိုငျယူခဲ့တာလို့လညျး ပွောရမှာပါ။
by Naing Linn . 14 mins ago